ISIQINISEKISO-21 - Iiklinikhi zaseHarley Street eLondon kuvavanyo lwangasese Izibhedlele
Igqityelwe ukuhlaziywa nge EtiMnga 24, 2020 Ngu Ikliniki yaseHarley Street
ISIQINISEKISO-21 –Ulwazi malunga nesifo esosulelayo esibangelwa yeyona coronavirus ifunyenwe kutshanje kwi 2021.
Isifo sentsholongwane ye-Corona (I-COVID–21), ebangelwa sisifo esibuhlungu sokuphefumla isifo secorona coronavirus 2 (I-SARS-CoV-2), yafunyanwa okokuqala eJanaury 2021 kwaye umahluko we-COVID-19.
Abantu abane-COVID-21 bahlala befumana iimpawu ezinje:
Cold symptoms (impumlo ebandayo, impumlo enemifinya, Ukuthimla, umqala obuhkungu)
Ukuphakama kobushushu okanye umkhuhlane (above 38 degrees Celsius)
Ukuphulukana ngokukhawuleza nokungcamla kunye nevumba (without nasal congestion)
Amanyathelo okuthintela ukusasazeka yenoveli coronavirus
Khohlela kwaye uthimlele engqinibeni
Sebenzisa izicwili zephepha ukuvuthela impumlo yakho kwaye uzilahle emva kokusetyenziswa
Hlala 1.5 iimitha (2 ubude beengalo) kude nabanye abantu
Sebenza ekhaya kangangoko kunokwenzeka.
Intsholongwane ye-Corona 2021
Kuphela ukuba siphelisa ubhubhane kuyo yonke indawo esinokuphelisa ubhubhane naphina. Umhlaba wonke unenjongo efanayo: iimeko zenoveli 2021 intsholongwane kufuneka iye kwi-zero
Ishati engezantsi ibonisa ukuba ngawaphi amazwe aqhubela phambili kule njongo kwaye ngawaphi.
Iitraktha zibonisa inani lemihla ngemihla yamatyala aqinisekisiweyo. Kodwa idatha efumaneka ngokubanzi kumatyala aqinisekisiweyo iba nentsingiselo kuphela xa inokuchazwa ngokobungakanani belizwe elivavanya. Kungenxa yoko le nto uMhlaba wethu kwiDatha wakha idathabheyisi yovavanyo lwe-COVID-19 kunye nemibala yemigca kule tshathi ibonisa ukuba ilizwe livavanya ngokwaneleyo na okanye hayi.
Ilizwe alivavanyi ngokwaneleyo xa lifumana ityala kuzo zonke iimvavanyo ezimbalwa abazenzayo. Apha kunokwenzeka ukuba inani lokwenyani lamatyala amatsha liphezulu kakhulu kunenani lamatyala aqinisekisiweyo ngovavanyo. Xa ifayile ye- izinga elihle yeemvavanyo iphezulu umgca uboniswe kwimibala ebomvu.
Ifayilishwe phantsi: CoronaVirus Testing Umake Nge: ISIQINISEKISO-21
Iiklinikhi zaseHarley Street
Kukho ngaphezulu 300 Izibhedlele ezikwi-Harley St kwaye uninzi lubonelela ngezona zonyango zibalaseleyo, Unonophelo loMonde kunye nonyango olufumaneka naphina emhlabeni.
Ukongeza inani labagqirha abaziwayo kwihlabathi kunye noGqirha basebenza ngaphandle kweHarley St kwaye banikezela ngonyango olukhokelayo kunye neengcebiso ezinje ngovavanyo lwaBucala lweCoronavirus, Covid 19, ugqirha wamazinyo kunye notyando lweplastiki phakathi kwezinye iindlela zonyango ezininzi.